Coke, mazava ho azy, no mpitondra. Na aiza na aiza izy ireo, ary angano ny tombom-bolany. Ohatra lehibe amin'ny mpitondra izy ireo. Ary satria manana mpifaninana matanjaka toy izany izy ireo ao amin'ny Pepsi, dia tena tsy afaka manana fizarana tsena intsony izy ireo. Ka ny hany safidin'izy ireo hivoatra dia ny miditra amin'ny tsena vaovao. Fa maninona Satria mora vidy kokoa ny manokatra fizarana an'i Shina noho ny manaisotra an'i Pepsi hiala ny Safeway.
Pepsi dia Faharoa matanjaka. Izy ireo koa dia hatraiza hatraiza, ary tena heverina ho ny solon'ny Coke tokana. Ka ahoana ny fitomboan'izy ireo? Lafo sy sarotra ny mandray anjara lavitra an'i Coke, saingy mora kokoa sy mora kokoa ny miditra any Shina herintaona aorian'ny coke. Nesorin'izy ireo ny fitomboan'ny sokajy Coke.
Fanontaniana tsara. Ary ny valiny dia tonga amin'ity: raha fantatrao ny toerana misy anao dia hainao ny mifaninana tombony. Raha tsy fantatrao ny toerana misy anao dia azo inoana fa hamidy orinasa, marketing, na drafitra fitomboana handany vola be ianao amin'ny fanandramana hamindra anao any amin'ny toerana tsy azonao tratrarina. Ny tena zava-dehibe dia ny fahafantaranao ny toerana misy anao dia azonao atao ny mamolavola drafitra fandraharahana sy varotra izay miorim-ponenana ny tombom-barotrao ary mahazo taha avo dia avo.
Tsara foana ny mamerina mijery ary tena tiako ilay fampisehoana - Tsara Vita ary mazava ho azy fa Boutique aho 🙂
24 Mey 2010 tamin'ny 1:54 hariva
Ny lafika iray mahaliana dia ny – miankina amin'ny zavatra tadiavin'ny mpividy – afaka manana andraikitra samihafa ianao. Ohatra, i Jones no mpilalao mibahan-toerana ao amin'ny soda bizina / asa-tanana / premium, saingy mazava ho azy ny bizina rehefa jerena mifanohitra amin'ny coke.
Izay no mahaliana ny asanay.